Iko a na-etinye na ọkpọ mmiri ka a ga-eji mee ihe oriri na mmiri ọ storageụ drinkingụ, mmiri nsị, injin biogas, nchekwa ihe bekee, mmanụ ala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
A na-eji otutu n'ime ha na obere ugbo (ihe dị ka 10000-20000 anụ ụlọ) na ngwaahịa ugbo na-arụrụ onwe ha na ụlọ ọrụ na-ahazi ngwaahịa.
Maka ụlọ ọrụ ugbo na ndị ọrụ ugbo, Separation CSTR bụ nhọrọ kachasị mma, yana uru na ịdị mma nke arụ ọrụ.
A na-etinye ya na nnukwu ahịhịa na-emepụta biogas nke kwesịrị ijikwa na mpaghara dị iche iche ma ọ bụ iche iche, ọ nwere ike karịa na nchịkwa ihe mkpofu etiti na ọkachamara ọzọ.
Ojiji dị iche iche, tank ahụ dịkwa iche iche, anyị nwere ike dịka mkpa ndị ahịa dị, tank a haziri ahazi. Companylọ ọrụ anyị nwere ike igbo mkpa gị ọ bụla.
Tank n'ime tank
Tank nwere imewe mmiri, arụmọrụ kachasị na mbara ikuku, nke a na-ejikarị mmiri ịgba mmiri, wdg.
Ala mmiri na-echekwa ikuku
A na-ejikarị ya maka akụrụngwa nwere nnukwu mgbanwe na ngwaọrụ. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla.